Rwanda · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Rwanda
Bilaogy ao Zimbaboe, Burundi, RDC, Malawi
Borondi24 Oktobra 2018
Zimbaboe: Feno 82 taona amin'ny volana manaraka i Robert Mugabe, farany amin'ireo "lehilahy lehiben'i Afrika". Nanomboka nimenomenona momba ireo drafitra fikarakarana ny fety tsingerintaona mihoam-pampana ny mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana ZANU-PF na dia eo aza ny fitontongan'ny toekarena sy ny hanoanan'ny mponina.
Feo avy amin'ny “Zimbabwe Plus”
Borondi06 Oktobra 2018
Eny an-dalambe no hitranga ny fanovàna...Fitetezana ireo bilaogy farany indrindra tao Burundi, RDC, Malawi ary Zimbaboe nandritry ny herinandro (voalohany tamin'ny taona 2005).
Vehivavy roa sahy nanohitra ny filoha Roandey Paul Kagame
Fahalalahàna miteny26 Septambra 2018
Amin'ny fanitarana ny 23 taona naha-teo azy amin'ny fitondrany, tsy omen'i Kagame ho an'ny Roandey ny fahafahana voalohany miaina tetezamita milamina amin'ny fahefana ao amin'ny fireneny.
Roandà: Miaina Toy ny Mpanjaka Ireo Mpiasa Amin'ny Fikambanana Mpanao Asa Soa
Fampandrosoana30 Aogositra 2018
Azo lazaina ho miaina toy ny mpanjaka ry zareo, mihataka amin'ny vahoaka, ny antoandro dia matetika ry zareo no any anaty birao... Fa ahoana no ahafahany manantena hahatakatra ny zavamisy iainan'ny olona tian-dry zareo ho ampiana raha toy izany no fomba fiainany ?
Eoropa Andrefana29 Jolay 2018
Fahasalamana: Finday Ampiasaina Ho Amin'ny Fahasalamana
Amerika Latina16 Mey 2018
Fikambanana telo mpanao asa soa no nanambatra ny heriny mba hanolotra ireo fikarakaràna mendrika indrindra amin'ny resaka fahasalamana, amin'ny alalan'ny fampiasana ireo finday sy ny informatika. Zavatra manokana katsahan'ireo hetsika teknolojia finday ireo ny hanatsaràna ireo tolotra amin'ny fahasalamana any anatin'ireo firenena andalam-pandrosoana.
Nyota Ndogo, Mpihira Afrikana, Manana Klioban'ny Mpiondana an-Tserasera
Borondi09 Febroary 2018
Raha mahita ny lahatsoratra amin'izao fotoana izao ao amin'ny bilaoginy isika, hita fa mahafehy tsara ny fampiasana blaogy i Nyota. Indrisy anefa fa tsy azo lazaina ho toy izany ireo mpanakanto maro hafa any Afrika Atsinanana, satria tsy nahita bilaogy na mpanankanto hafa ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.